ဒီနီဘိုလာ - ဝီကီပီးဒီးယား
11° 49′ 03.57834″
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) –0.2 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: –497.68 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 90.91 ± 0.52 mas
အကွာအဝေး ၃၅.၉ ± ၀.၂ ly
(၁၁�00 ± ၀.၀၆ pc)
ပကတိ အရွယ်အစား (MV) +1.93
ဒြပ်ထု 1.78 M☉
အချင်းဝက် 1.728 R☉
တောက်ပမှု 15 L☉
မျက်နှာပြင် ဒြပ်ဆွဲအား(log g) 4.0 cgs
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 8,500 K
သတ္တုကြွယ်ဝမှု [Fe/H] +0.00 dex
စတီလာ သက်တမ်း 100–380 Myr
ဒီနီဘိုလာ (Denebola) (/dəˈnɛbələ/) သည် လီယို ကြယ်စုတန်းရှိ ဒုတိယ အတောက်ပဆုံး ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်သည်။ နေထက် ထုထည်ပမာဏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ကြီးမားပြီး အဆပေါင်း ၁၅ဆ ပိုမိုတောက်ပသည်။ parallax နည်းဖြင့် တိုင်းတာချက်များအရ ယင်းသည် နေမှ အလင်းနှစ် ၃၇ ကွာဝေးပြီး သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သည်။ ကြယ်သည် နာရီအနည်းငယ်အတွင်း တောက်ပမှု အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲ ရှိလေသည်။ သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ မီလီယံခန့်သာ ရှိသောကြောင့် အလွန်ငယ်ရွယ်သော ကြယ်တစ်စင်းဖြစ်ကာ နေ၏အချင်းဝက်ထက် ၁၇၃% ပိုများသည်။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Gutierrez-Moreno၊ Adelina; et al. (1966)၊ "A System of photometric standards"၊ Publ. Dept. Astron. Univ. Chile၊ Publicaciones Universidad de Chile, Department de Astronomy၊ 1: 1–17၊ Bibcode:1966PDAUC...1....1G
↑ Mkrtichian၊ D. E.; Yurkov၊ A. (5–7 November 1997)။ "β Leo - Back to Delta Scuti Stars?"။ Proceedings of the 20th Stellar Conference of the Czech and Slovak Astronomical Institutes။ Brno, Czech Republic: Dordrecht, D. Reidel Publishing Co.။ p. 172။ Bibcode:1998vsr..conf..143M။ ISBN 80-85882-08-6။
↑ Evans၊ D. S. (June 20–24, 1966)၊ Batten, Alan Henry; Heard, John Frederick (eds.)၊ "The Revision of the General Catalogue of Radial Velocities"၊ Determination of Radial Velocities and their Applications၊ University of Toronto: International Astronomical Union၊ 30: 57၊ Bibcode:1967IAUS...30...57E
↑ Anderson၊ E.; Francis၊ Ch. (2012)၊ "XHIP: An extended hipparcos compilation"၊ Astronomy Letters၊ 38 (5): 331၊ arXiv:1108.4971၊ Bibcode:2012AstL...38..331A၊ doi:10.1134/S1063773712050015.
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ ၇.၄ "VLTI near-IR interferometric observations of Vega-like stars" (2004). Astronomy and Astrophysics 426 (2): 601–617. doi:10.1051/0004-6361:20047189. Bibcode: 2004A&A...426..601D.
↑ ၈.၀ ၈.၁ "Chemical analysis of 24 dusty (pre-)main sequence stars" (2004). Astronomy and Astrophysics 427 (3): 1009–1017. doi:10.1051/0004-6361:20041460. Bibcode: 2004A&A...427.1009A.
↑ Royer၊ F.; Zorec၊ J.; Gómez၊ A. E. (February 2007)၊ "Rotational velocities of A-type stars. III. Velocity distributions"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 463 (2): 671–682၊ arXiv:astro-ph/0610785၊ Bibcode:2007A&A...463..671R၊ doi:10.1051/0004-6361:20065224
↑ * bet Leo။ SIMBAD။ Centre de données astronomiques de Strasbourg။ 2007-06-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Denebola။ Alcyone။ 2006-08-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒီနီဘိုလာ&oldid=716208" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။